Yakachipa inosiyana frequency drive ye 3 chikamu mota yemutengo wekutengesa
inoshandurwa frequency drive ye3 chikamu mota yekutengesa
Tora zvibodzwa zvakanakisa pane Variable Speed ​​drive.
AC Drives | Anochinjika Frequency Drives | VFD | Inverter
Anomhanyisa anomhanyisa madhiraivha (VSD), inonziwo inogona kuchinjika kumhanyisa madhiraivha (ASDs), zvishandiso zvinogona kusiana nekumhanya kweanowanzogadziriswa kumhanya mota. Adaptable kumhanyisa kumhanya (ASD), inozivikanwawo seyakafanana-kumhanya drive (VSD), inotsanangura zvishandiso zvinoshandiswa kudzora kukurumidza kwemashini. Mazhinji maindasitiri maitiro senge mitsara yemasangano anofanirwa kushanda nekumhanyisa kwakasiyana zvigadzirwa zvakasiyana. A variable frequency drive (VFD) imhando yemotokari inotyaira iyo inomhanyisa mota yemagetsi nekusiyanisa mafambiro nemagetsi emagetsi. Aya mapombi anoshandisa makomputa anodzora, anozivikanwawo seVakasiyana Frequency Drives kana VFD's
Variable Frequency Drives - mota Yekumhanyisa Controls-Soft Starter kana kusiyanisa-frequency drive
Zvekushandisa uko kumhanya kwakasarudzika kuchidikanwa, kazhinji AC mota ine Inverter kana brashi motors anoshandiswa. Vertical Transportation: Yemazuva ano VVVF Drives uye PM Machines.
Isu tine yedu yekutsvagisa uye yekuvandudza timu, inosanganisira vane ruzivo mainjiniya epamusoro, uye vechidiki mainjiniya ekugadzira uye anoshanda ekufunga.Zvigadzirwa zvedu zvese zvinogadzira uye zvinogara.
Chinogadziriswa chinomhanyisa mota chinogona kunge chiine mota yemagetsi uye chidhiraivho chinoshandiswa kugadzirisa kumhanya kwekufambisa kwemota.
Mazhinji akura akasiyana frequency frequency dhiraivhu aisiyaniswa nemhando yeinverter wedunhu anoshandiswa muVFD. ABB's anoshanduka-anomhanyisa anotyaira anomhanyisa kumhanya kwemagetsi emagetsi kuenzanisa iro basa riri muruoko, kuchengetedza simba uye nekuvandudza pefomance.
Variable Frequency Shandisa maApplication muHVAC Systems, inoshandurwa frequency madhiraivha kune dummies, inoshandurwa frequency drive dunhu, iyo inodzora simba, ese ari maviri voltage uye frequency.
20 Hp Vfd Mutengo
7.5 kw vfd mutengo
Danho rimwechete Rakasiyana Frequency
30 hp vfd mutengo
vfd ye2hp 3 phase mota
5 Zvikonzero Zvekusarudza Isu
1.Tinopa yakakwira mhando, low mitengo zvigadzirwa.
2.Our mutengi masevhisi edu ari online zuva rese uye mushure mekutengesa service inoteerera.
3.Tine yedu yekutsvagisa uye R & D timu uye tinogadzira
4.Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kumba nekune dzimwe nyika uye zvinogona kuvimbwa.
5.We isu fekitori ine makore mazhinji echiitiko chekugadzira, uye makore mazhinji ekugadzira ruzivo ndeyekungokupa iwe mhando inomhanya mhanya kumhanya.
Kana iwe uine chero mibvunzo iwe unogona zvakare kutibata nesu, tichafara kukubatsira!